House of Gucci (2021) (မြန်မာစာတမ်းထိုးရုပ်ရှင်) – AHUNT BHONE MYAT
● ဒီကနေညတော့ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်သည်းကျော် ဂါဂါမလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ စွယ်စုံရအနုပညာရှင်မလေး လေဒီ ဂါဂါ (Lady Gaga) အဓိက သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “ဂူချီအိမ်တော်” မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရမယ့် House of Gucci (2021) ရုပ်ရှင်လေးအကြောင်းကို မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
● အီတလီနိုင်ငံ၊ ဖလောရင့်စ်မြို့ (Florence) အခြေစိုက် ကမ္ဘာကျော် အဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံ ဖက်ရှင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (High-End Luxury Fashion Brand) တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gucci ဖက်ရှင်အိမ်တော်မှာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ကမ္ဘာကျော်လူသတ်မှုကို အခြေခံပြီး ဒါရိုက်တာ ရစ်ဒလေ စကော့တ် (Ridley Scott) က ဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ အမေရိကန် အတ္ထုပ္ပတ္တိဒရာမာဇာတ်ကား တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
● ပြသချိန် (၁၅၈) မိနစ် ကြာမြင့်ချိန်ရှိတဲ့ “ဂူချီအိမ်တော်” မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရမယ့် House of Gucci (2021) ဇာတ်ကားဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကတည်းက စတင်ပြီး ထုတ်ဝေပြသခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းကျမှ HD1080 ရုပ်သံအရည်အသွေး အပြည့်အဝနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကို ထွက်ရှိလာတာပါ။
● ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကကျောရိုးကတော့ Gucci ဖက်ရှင်အိမ်တော်မှာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ကမ္ဘာကျော်လူသတ်မှုကို အခြေခံထားတဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိဒရာမာဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကမ္ဘာကျော် လူသတ်မှုက ဘယ်လို လူသတ်မှုလည်းဆိုတာနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လည်းဆိုတာ မဖြစ်မနေ သိထားကြဖို့ အထူးလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
● လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်ကတော့ ၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ (ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဆိုရင်တော့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ (တပ်မတော်နေ့) အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်မြို့မှာ Gucci ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ တတိယမျိုးဆက် အမွေဆက်ခံသူ မော်ရီဇီယို ဂူချီ (Maurizio Gucci) (အသက် ၄၆ နှစ်) သေနတ်သမားတစ်ဦးရဲ့ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ် လုပ်ကြံတာကို ခံခဲ့ရတာပါ။
● လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ အခကြေးငွေပေးပြီး နောက်ကွယ်က စေခိုင်းညွှန်ကြားခဲ့သူကတော့ မော်ရီဇီယို ဂူချီ (Maurizio Gucci) နဲ့ သမီးတစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့တဲ့ ဇနီးသည်ဟောင်းဖြစ်သူ ပက်ထရီဇီယာ ရီဂျီယာနီယာ (Patrizia Reggiani) ဖြစ်ပါတယ်။
● ဘာကြောင့်များ သတ်ဖြတ်ဖို့အအထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတာလဲဆိုရင် တစ်ခွန်းတည်း ပြောရရင် တော့ မစ္ဆရိယစိတ်ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေကြောင့်လိုသာ ဆိုရမှာပါ။ ဒါကပဲ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိက စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးနဲ့ House of Gucci (2021) ဇာတ်ကားကနေ အဓိက ပေးချင်တဲ့ လောကအမြင်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
● House of Gucci (2021) ရဲ့ အဓိကသော့ချက်ဖြစ်တဲ့ မစ္ဆရိယစိတ် ဆိုတာမျိုးတွေဟာ လူသားရဲ့ စိတ်ထဲကို ဘယ်ကနေ ဘာကြောင့် ဘယ်လိုဘယ်ပုံမျိုးစံတွေနဲ့ ဝင်ရောက် မွှေနှောက်စေပြီး လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး နောက်ဆုံး လက်တွေ့ယုတ္တိဖော်ဆောင်တဲ့အထိ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာလဲဆိုတာတွေကတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာသာ အပြည့်အဝ ခံစားတွေ့မြင်ကြားသိ နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
● ဆိုတော့ ဇာတ်ကားမှာတော့ ဘာပဲလုပ်လုပ် အကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စေတနာစိတ်အပြည့်လုပ်လေ့ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်သည်းကျော် လေဒီဂါဂါ (Lady Gaga) က ခင်ပွန်းဟောင်းကို ပစ်သတ်ဖို့ စီစဉ်ညွန်ကြားခဲ့သူ ပက်ထရီဇီယာ ရီဂျီယာနီ (Patrizia Reggiani) သူအဖြစ် အီတလီသံ ခက်ဝဲတည်းတည်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်ပြောပြီး အပိုင်နိုင်ဆုံး သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။
● သူနဲ့အပြိုင်ကတော့ ကမ္ဘာကျော်လူရွှင်တော်အဖြစ် နာမည်ကြီးတဲ့ သရုပ်ဆောင် အဒမ်ဒရိုင်ဗာ (Adam Driver) ကတော့ ဇနီးဟောင်းရဲ့ စီစဉ်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ Gucci ရဲ့ တတိယမျိုးဆက် အမွေဆက်ခံသူ မော်ရီဇီယို ဂူချီ (Maurizio Gucci) အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။
● ဒီနေရာမှာ ဇာတ်လမ်းအခြေတည်ရာ အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်မြို့ကြီးနဲ့ ဖလောရင့်စ်မြို့ကြီး အကြောင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာကျော် အဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံ ဖက်ရှင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (High-End Luxury Fashion Brand) တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gucci ဖက်ရှင်အိမ်တော်နဲ့ မျိုးဆက်တွေအကြောင်းကို အများကြီးပြောပြလိုပေမယ့် စာအရမ်းရှည်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် အကျဉ်းလောက်တော့ကို မဖြစ်မနေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
● ဆိုတော့ ကမ္ဘာ့အဖိုးတန်ရတနာ (World’s Precious Treasure) လို့ဆိုနိုင်မယ့် Gucci ဖက်ရှင်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀၁ နှစ် ၁၉၂၁ မှာ သားရေလက်မှုပညာရှင်နဲ့ သားရေကုန်သည် ဂူစီယို ဂူချီ (Guccio Gucci) က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ မျက်မှောက်ခေတ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာတော့ ကမ္ဘာနဲ့တဝှမ်းမှာ ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၄၈၇ ဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီး တစ်နှစ်ဝင်ငွေကတော့ ပေါင် ၉.၆၂ သန်းဝန်းကျင်ရှိကာ အလုပ်သမားပေါင်း ၁ သောင်း ၇ ထောင်ကျော်ကို (CEO) မာကိုဘီဇာရီ (Marco Bizzarri) က ဦးဆောင်ကာ လည်ပတ်နေတာပါ။
● ဂူဂျီဖက်ရှင်အိမ်တော် အမျိုးအနွယ်တော်တွေကတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကြောင့် အနည်းငယ် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်စေရတယ်လို့ဆိုတဲ့ ကြေညာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အကြောင်း အီတလီ မီဒီယာတွေကတော့ ဖော်ပြနေကြတာပါ။
● ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ အဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ (High-End Luxury Fashion Designer) တွေထဲက Gucci Label မှာ ၁၉၉၀-၂၀၀၄ အထိနဲ့ YSL Label မှာ ၁၉၉၉-၂၀၀၄ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကို ၂၀၀၄ မှာ စတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာ Tom Ford ရဲ့ ဘဝကောက်ကြောင်း အချို့ကိုလည်း မြင်တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ပြောရင်းနဲ့ လောကအမြင်တွေကို မျှဝေရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း အဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။
● ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ Blog ပေါ်မှာနဲ့ Facebook Page တွေပေါ်မှာ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းတွေ ရေးသားပြီး မြန်မာစာတမ်းတွေကို Google နဲ့ Microsoft Bing တို့လို Translator တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ စာတမ်းထိုးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေး နေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းလေးကို ပြောပြလိုပါတယ်။
● ဒါကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကတော့ လောကပါလတရားတွေ ထွန်းကားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကတော့ လောကအမြင်တွေရှိကြမှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲ့ဒီလောကအမြင်တွေ ရှိတဲ့ လူသားတွေနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ အသုံးပြုပြီး တည်ဆောက် ကြရမှာလဲ ဆိုတာ အဓိက မေးခွန်းဖြစ်လာပါတော့တယ်။
● လောကအမြင်ဆိုတာမျိုးတွေကလည်း ဘာသာတရား အဆုံးအမတွေနဲ့ ပဉာတ် ပြဌာန်းပေးထးရုံ၊ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ပြဌာန်းပေးထားရုံ၊ ပညာသင်ကြားမှုဆိုတာမျိုးတွေ ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးရုံတွေနဲ့ လုံလောက်ပြည့်စုံနိုင်တာမျိုးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ စဉ်ဆက်မပျက် အမျိုးမျိုးဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လောကရဲ့ သဘော သဘာဝတွေကို ကျွန်တော်တို့ နိစ္စဓူဝ တွေ့မြင်ကြားသိ သင်ခန်းစာယူ (Lesson Learned) လုပ်ပြီး လက်တွေ့လူမှုဘဝမှာ ဆင်ချင်သုံးသပ်ပြီး ပြန်လည်အသုံးချမှုတွေနဲ့သာ အဆိုးသံသရာ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်လည်မှု တွေကို ကျွန်တော်တို့ အဆုံးသတ်နိုင်ပြီး ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ ပြည်ထောင်စုကို ထည်ထောင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
● ဒီနေရာမှာ ၁၈ ရာစု ဉာဏ်အလင်းခေတ်ရောက်ရှိရေး ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျာမန် ဒဿနပညာရှင် အီမန်နူဝဲလ် ကန့်တ် (Immanuel Kant) မိန့်ဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ “အတွေ့အကြုံ မရှိတဲ့ သီအိုရီက မျက်ကန်းလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် သီအိုရီမရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံကတော့ ဉာဏ်ပညာနဲ့ ကစားရတာမျိုးဖြစ်တယ်။” ဆိုတဲ့ (Experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play.) လို့ မိန့်ဆိုခဲ့တာလည်း ဖြစ်မှာလို့ တွေးမိနေပါတယ်။
● ဆိုတော့ အဲ့ဒီ လောကအမြင်နဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ရယူနိုင်မလဲ ဘယ်လိုသင်ယူကြရမှာလဲဆိုတာက အဓိကထပ်ပြီး ရှိလာပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သတင်းစာပညာမှာ ရှိတဲ့ သတင်း (NEWS) ဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုက ပြီးပြည်စုံလုံလောက်တဲ့ အဖြေကို ပေးနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ သတင်း (NEWS) ဆိုတာဘာပါလဲ ?
● ယေဘုယျ သတင်းရဲ့ အဓိပွါယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေမှာတော့ မြောက် (North)၊ အရှေ့ (East) ၊ အနောက် (West) ၊ တောင် (South၊) စတဲ့ သံလိုက်အိမ်မြောင်ပါ အရပ်မျက်နှာအသီးသီးက လာတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို တစ်လုံးယူပြီး News ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဆိုတဲ့ အယူအဆရှိသလို.. အခြားတစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်း..
● အသစ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ လက်တင်ဘာသာ နိုဗာ (Nova) နဲ့ ပြင်သစ်ဘာသာ (Nouvelles) တို့ကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး (၁၄) ရာစု အလယ်ခေတ်အရောက် အင်္ဂလိပ်စာပေမှာ အသစ်ဆိုတာကို အများကိန်း အနေနဲ့ News အဖြစ် တုပအသုံးပြုလာတာဆိုတာကလည်း ရှိနေတာ.. ဆိုတော့ ပြန်ချုပ်ရရင် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အရှေ့အနောက်တောင်မြောက်တွေလို့ဆိုတဲ့ လောကကြီးတခွင်လုံးက လာတဲ့ အသစ်အသစ်သော အကြောင်းအရာ လောကအမြင်တွေလို့ ကျွန်တော်တို့ မှတ်ယူနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
● ဒါကိုကျွန်တော် ဘာကြောင့် ဒီလောက်အကျယ်ချဲ့ပြီး ပြောနေရတာလဲဆိုရင်ကတော့ သတင်းဆိုတာနဲ့ လူတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်ကြတဲ့ စိတ်အထင်နဲ့ အမြင်တွေမှာ ဘ ၆ လုံးကိုသာ မြင် အခြားအရာတွေနဲ့ မသက်ဆိုင် တခြားအရာတွေက အနုပညာတွေနဲ့ ဆက်စပ်တာတွေလို့ ထင်တတ် မြင်တတ်ကြလွန်းလို့ ကျွန်တော်တိုရဲ့ လူမှုရေးသိပ္ပံ (Social Sciences) ဘာသာရပ်တွေထဲက လူထုဆက်ဆံဆက်သွယ်ရေးနှင့် လူထုသတင်းမီဒီယာ (Mass Communication and Mass Media) ဘာသာရပ်တွေရဲ့ အခြေခံတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
● ဒီလို စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ သဘင်၊ ဂီတတွေက ပေးနေတဲ့ လောကအမြင်နဲ့ လောကအသိတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ၊ အသိအမြင်တွေ၊ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အလေအထ သဘာဝတွေ (Experience and Theory) တွေကို ထိုးထွင်းသိမြင်ဆင်ချင်သုံးသပ်မှု (Intellectual) လုပ်ပြီး အဆိုးသံသရာလည်မှုတွေကို အဆုံးသတ်ပြီး လွတ်မြောက်မှု ဝိမုတိဖြစ်နိုင်ကြဖို့ အဓိက ရည်ရွယ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေ ပေးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို အဓိက ပြောလိုတာပါတယ်။
အံ့ဘုန်းမြတ် 15 FEB 2022 / 225000PM
အဓိက သရုပ်ဆောင်များ (Main Casts)
လေဒီဂါဂါ (Lady Gaga) – ပက်ထရီဇီယာ ရီဂျီယာနီယာ (Patrizia Reggiani)
အာဒံဒရိုက်ဗာ (Adam Driver) – မော်ရီဇီယို ဂူချီ (Maurizio Gucci)
ဂျဲရက်လက်တို (Jared Leto) – ပါအိုလို ဂူချီ (Paolo Gucci)
ဂျယ်ရီမီ အိုင်ရွန် (Jeremy Irons) – ရိုဒိုလ်ဖို ဂူချီ (Rodolfo Gucci)
ဆာလမာ ဟိုက်ခ် (Salma Hayek) – ပီနာအော်ရီအမ်မာ (Pina Auriemma)
အယ်လ် ပါစီနို (Al Pacino) – အယ်လ်ဒို ဂူချီ (Aldo Gucci)
ရစ်ဒလေ စကော့တ် (Ridley Scott)
ဇာတ်ညွှန်းနှင့် စာရေးဆရာများ (Writers)
Becky Johnston(screenplay by)
Roberto Bentivegna (screenplay by)
Sara Gay Forden (based on the book by)
● Megaup Download Link
Download House.Of.Gucci.2021.1080p.Burmese.mp4 from MegaUp